काठमाडाैं पुग्याे एग्रिमो :: Press Chautari ::
काठमाडाैं पुग्याे एग्रिमो
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. कार्कीको
अमेरिकाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित डा. अर्जुन कार्कीको एग्रिमो अन्ततः काठमाडौं पुगेको छ । अमेरिकी सरकारका विभिन्न विभागहरुको स्वीकृति हासिल गर्दै स्टेट डिपार्टमेन्ट पुगेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनको एग्रिमो नेपाल पुगेको हो । डा. कार्कीको एग्रिमो नेपाल पुग्न करिव दुई महिना लागेको थियो ।
अब केही आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्पति डा. रामवरण यादवले डा. कार्कीलाई औपचारिक रुपमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गर्नेछन् । प्रक्रिया सुरु भैसके पनि यो पूरा गर्न अरु दुई साता लाग्ने परराष्ट् मन्त्रालय प्रोटोकल विभागले जनाएको छ । प्रोटोकल विभागको टिप्पणी, परराष्ट् सचिव हुदै परराष्ट् मन्त्रीस्तरीय निर्णयको चरणमा पुग्नेछ । र, त्यो निर्णय क्याविनेट हुँदै राष्ट्पति कार्यालयमा पुगेर औपचारिकता पूरा गर्नेछ ।
डा. कार्कीको लटमै भारतका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायको भने अझै एग्रिमो काठमाडौं पुगेको छैन । सरकारले गत माघ महिनामै भागवन्डाका आधारमा एमाले युवा नेता कार्कीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि र कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
एग्रिमो पुगेपछि पनि डा. कार्कीले उपाध्यायलाई पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । सँगै सिफारिस भएका कार्कीलाई पहिले नियुक्ति गर्दा उपाध्यायको एग्रिमो नआएको भनेर कांग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्न सक्छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै खास सिफारिसमा उपाध्यायको मनोनयन भएकाले पनि कोइरालाले क्याविनेटमा नअड्काउलान् भन्न सकिन्न ।
अनुमानको खेल जारी रहँदा अबको एक महिनाभित्र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा डा. कार्कीले आफ्नो उपस्थिति जनाउनेछन् । उनको उपस्थितिसँगै अमेरिकाका लागि पछिल्ला नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्र्माले आफ्नो अवधि पूरा गरेपछि कार्यवाहकले चलाएको राजदूतावासले पूर्ण नेतृत्व पाउँनेछ ।
डा. शर्माको लगत्तै नियुक्त भएका डा. कार्कीको कार्यकाल उनका पूर्ववर्ती डा. शर्माको सफलतम् कार्यकालसँग तुलना गरिने भएकाले डा. कार्कीका लागि यो भूमिका फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुने छ । विकासे कार्यालय र कार्यक्रम चलाउने अनुभवले उनलाइृ थोरै सहयोग पुगे पनि त्यो पर्याप्त हुँदैन । अर्कोतिर करिअर डिप्लोम्याटभन्दा बाहिरबाट आएकालाई खोताला डिप्लोम्याट भन्दै दूतावासकै कर्मचारीहरुले पनि मन खोलेर सहयोग गर्दैनन् । अमेरिकामा सानो संख्यामा रहेको एमाले डायस्पोरा पनि उनका लागि खासै सहयोगी बन्नै छैन । यी तीन प्रतिकुलताका कारण डा. कार्कीले फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
शुक्रवार, २०७१ चैत्र १३ गते १८:५१ / Friday, Mar 27, 2015 6:51 pm